Otu esi etinye & hazie GitLab na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
October 8, 2021 by Jọshụa James
Wụnye ndabere maka GitLab
Mepụta & Bubata ebe nchekwa GitLab
Otu esi ahazi GitLab
Otu esi enweta GitLab
Mepụta Cronjob maka GitLab Nchekwa akpaaka
GitLab bụ ebe nchekwa koodu dabere na webụ n'efu na mepere emepe maka mmepe ngwanrọ mmemme maka DevOps, nke edere n'asụsụ mmemme Ruby na Go. Isi okwu GitLab bụ "Weta ọsọ ọsọ na ntụkwasị obi, nchekwa na-enweghị ịchụ àjà, yana visibiliti n'ime ihe ịga nke ọma DevOps." Ọ bụ ihe ọzọ ama ama na GitHub na-enye wiki, nleba anya okwu, yana ntinye aka na nrụnye pipeline na-aga n'ihu, na-eji ikike mepere emepe, nke GitLab Inc mepụtara.
N'ime nkuzi na-esote, ị ga-amụta ka esi etinye GitLab na sistemụ Debian 11 Bullseye gị, yana otu esi amalite site na ịbanye na mgbọrọgwụ ka ị wee malite ịtọ GitLab ka ọ masịrị gị ma ọ bụ maka ihe ndị otu gị chọrọ.
Tupu ị wụnye GitLab na sistemụ arụmọrụ Debian 11 Bullseye gị, ị ga-achọ ịwụnye ndabere maka ya ka ị nwee ike ịwụnye ma rụọ ọrụ GitLab.
Mepee ọdụ gị wee mebie iwu a:
Site na ndabara, GitLab anaghị abịa ngwugwu na ebe nchekwa Debian 11. Nke a pụtara na ị ga-achọ iji aka mepụta otu. Agbanyeghị, GitLab ekepụtala gị ederede APT dị mma ka ibudata na mebie iji nyere gị aka n'ọrụ a.
Budata edemede GitLab APT site na iji iwu iwu:
Ihe atụ sitere na edemede:
Ugbu a, tupu ịga n'ihu, ị ga-achọ ịgbanwe ebe nchekwa GitLab mebere. Nke a bụ n'ihi na ewepụtara Debian 11 Bullseye ọhụrụ, na ha emebeghị ebe nchekwa maka ya. Agbanyeghị, ị ka nwere ike ịwụnye GitLab wee nweta mmelite site na ịgbanwe ebe nchekwa na Debian 10 Buster.
Iji mee nke a, nke mbụ, mepee ya "gitlab_gitlab-ce.list" faịlụ site na iji editọ ederede ọ bụla:
Na-esote, dochie ahịrị nchekwa abụọ site na "bullseye main" na "buster main."
Ihe atụ eserese:
Ozugbo emere, CTRL + O wee pụọ na faịlụ na CTRL + X.
Ugbu a gbanye iwu mmelite dabara adaba iji nyochaa ma mekọrịta ebe nchekwa ọhụrụ ahụ.
Rịba ama, nke a nwere ike ịgbanwe n'ọdịnihu, a ga-emelite nkuzi mgbe nke a mere.
Akụkụ na-esote nkuzi a bụ ịwụnye GitLab, ma ị ga-ejirịrịrị iwu nwelite nke dabara adaba iji mekọrịta ebe nchekwa emepụtara na emezigharịrị ọhụrụ. Ugbu a mebie iwu wụnye site na iji ihe ndị a:
A ga-etinye ihe atụ na ihe ndabere na GitLab:
ụdị "Y," wee pịa "Tinye igodo" ịga n'ihu na ntinye. Rịba ama na nha nrụnye bụ 2.5GB, yabụ njikọ ịntanetị dị nwayọ nwere ike chere obere oge ka nbudata na nrụnye ga-agwụ.
Ozugbo echichi mechara, ị kwesịrị ị nweta ihe ndị a na njedebe gị.
Na GitLab arụnyere, ị nwere ike hazie SSL ugbu a, ngalaba aha ma ọ bụ okwuntughe aha subdomain, yana ọtụtụ ndị ọzọ. Nkuzi a ga-agafe nhọrọ ntọala ntọala kwesịrị ime. Agbanyeghị, ịnwere ike ịme ntọala ọzọ maka ndị edepụtara n'okpuru.
Nke mbụ, mepee "gitlab.rb" faịlụ nhazi site na iji editọ ederede ọ bụla:
Ntọala mbụ ga-abụ ịtọ ngalaba, ịgagharị na ahịrị 36, yana ịchọta ihe ndị a.
Gbanwee nke a ka ọ bụrụ aha ngalaba ngalaba gị.
Ọzọ, guzobe TLS/SSL na Let's Encrypt, nke na-amalite na ahịrị 2297.
Site na ndabara, a na-eji "#" kọwaa ntọala niile. Ị ga-achọ ikwughachi ahịrị ndị a.
Ugbu a na-agba ọsọ reconfigure iwu dị ka ndị a.
N'ikpeazụ, ị ga-enweta ozi a na ọdụ gị.
Ka ilele mgbọrọgwụ (GitLab) paswọọdụ, mee iwu na-esonụ.
Dị ka n'elu, ị nwere ike ịhụ paswọọdụ bụ "SGGg/WQ9+N1JdgouIbPftla+Kt8Qcyr+HL5oJfRbBmM=" na a ga-ehichapụ faịlụ a na-akpaghị aka n'ime awa 24.
Ugbu a edobere azụ azụ, ọ bụ oge ịbanye wee hụ GitLab gị.
Nke mbụ, mepee ụzọ ngalaba ebe e kenyere GitLab na faịlụ nhazi.
Ọzọ, jiri aha njirimara banye "Mgbọrọgwụ" na paswọọdụ ị nwetara, nke dị na nkuzi nkuzi bụ "SGGg/WQ9+N1JdgouIbPftla+Kt8Qcyr+HL5oJfRbBmM=".
Ị banye nke ọma dị ka akaụntụ mgbọrọgwụ, ị ga-akụkwa ibe ọdịda ndabara.
Site ebe a, ị nwere ike ịga n'ihu ịtọlite ​​​​na hazie GitLab ka ọ dabara ihe gị chọrọ ma ọ bụ otu gị. Otu n'ime ihe mbụ ị ga-eme bụ ịga na ngalaba nchịkwa wee hazie nchekwa, dị ka 2FA, ịgbanwe okwuntughe mgbọrọgwụ, na ọtụtụ ndị ọzọ tupu ịtinye ndị otu ọ bụla. Enwere ike ịchọta ihe niile site na ịpị NchNhr > Onye nchịkwa n'elu aka ekpe akụkụ nke ibe.
Site na ndabara, enweghị nkwado ndabere na mpaghara emepụtara ma ọ bụ ahaziri. Ekwesịrị ịtọ nke a site na iji cronjob, ugboro ole na-atọkwa uru dabara maka nnweta akụrụngwa yana ugboro mgbanwe GitLab.
Nke mbụ, mepee crontab gị.
Na-esote, tinye ihe atụ na-esonụ ma gbanwee oge iji kwado mkpa gị. Ọ bụrụ na ị maghị oge maka oge, wee gaa crontab.guru.
Ihe dị n'elu na-emepụta ndabere kwa awa 3 kpọmkwem.
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike iji aka rụọ ọrụ ahụ n'oge ọ bụla site na ịme iwu na-esonụ.
Ozugbo ndabere e dechara, ị ga-enweta ozi na-esonụ na gị ọnụ.
N'ime nkuzi na-esote, ị mụtala ka esi etinye GitLab na Debian 11 Bullseye, guzobe TLS/SSL na Lets Encrypt, wee mepụta ọrụ cron ndabere. N'ozuzu, GitLab na-akwado onwe ya nwere ike ịdị mkpa karịa ịdabere na onye ọzọ ma ọ bụrụ na nzuzo bụ nnukwu nchegbu ma nwee ike ime ka mmepe dị mfe na ngwa ngwa.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Gitlab Mail igodo